Umi ngoJulayi, 2009.SWELL ingenye ngokwezifiso zezimboni kanye nemikhiqizo esibulalayo isixazululo Ukunikeza nenkampani enkulu kunazo zonke China.Currently zigcwala has a-R & D iqembu labantu abangaphezu kuka-amabili, Sales umxhumanisi ezingaphezu kuka nanhlanu nangaphezulu nekhulu namashumi ayisikhombisa ukukhiqizwa isisebenzi.
Bandisa izimisele ukuthuthukiswa okugcinekayo umkhakha esibulalayo ubuchwepheshe, ngomuzwa zochwepheshe kolwazi nezokuxhumana, zigcwala inikeza amakhasimende eliphezulu ifoni zezimboni kanye amaphilisi kabani ubuchwepheshe zihlanganisa NFC, RFID 125k / 13.56M / 915M / 2.4G, 1D / ibhakhodi 2D, ray infrared, ukuqashelwa zeminwe, ukuqashelwa ikhadi le-ID, ke kuphela uma u Talkie njll
Bandisa linikeza ukuncintisana ezimbonini ifoni, isixazululo ithebhulethi namasevisi abathengi ezimbonini ezahlukene ukubasiza ukuqhubeka umphakathi digital, okwamanje zigcwala abahlinzeke ezingaphezu kuka-35 imikhiqizo zezimboni ngezifiso okuyinto kabanzi Logistics, izinto zokuhamba, ukulondeka, zokulawula ukufinyelela, inkokhelo cashless, idatha bamba, inkonzo yasensimini, imfundo, ezempilo, ezempi, ezezimali, ukulawula zezimboni kanye nezinye izimboni ezihambelana. Futhi manje ichichima ifoni & I-Tablet, imishini IT, izixazululo futhi ukuphela ezihlakaniphile isetjentiswe emazweni angaphezu kuka-40 kanye nezifunda emhlabeni wonke.
Uma unikeza ikhambi elilodwa umkhakha, bandisa inikeza kwezinwele eziqine, hardware eyizingqabavu ukwenza isixazululo sakho ephelele. Uma ufisa ukuklama imodeli yakho ezimangelengele ukuze uvumelane zezimboni yakho, bandisa inikeza ngokwethembeka isiphakamiso, isipiliyoni kanye service.
Izitifiketi: Zonke zigcwala imikhiqizo ezimangelengele eqinisekisiwe nge CE isitifiketi / FCC / RoHS / IP.